Khabiir Qaramada Midoobay ka tirsan oo sheegtay in Sacuudi Carabiya ‘ay xannibtay’ baaritaanka dilkii Khaashuqji | RUUG-CADDAA
Image captionHaweenayda Qaramada Midoobay ay u saartay diyaarinta warbixinta dilkii Jamaal Khaashuqji Agnes Callamard ayaa booqatay qunsuliyaddii ninkaasi lagu dilay
Warbixinta kama dambeysta ah ayaa waxaa bisha Juun la horgeyn doonaa golaha Qaramada Midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha.
Maxaa ugu dambeeyay kiiska Khaashuqji?
Kuxigeenka Dacwad oogaha Sucuudiga Shalaan bin Rajih Shalaan ayaa waxa uu sheegay in baarayaashu ay soo ogaadeen in sarkaal ka tirsan sirdoonka uu amray dilka Jamaal Khaashuqji, isagoo gudaha qunsuliyadda lagula duray cirbad sun ah.
Askariga ayaa waxaa loo xilsaaray inuu weriyaha mucaaradka ah ka dhaadhaacsiiyo sidii uu dib ugu soo laaban lahaa Boqortooyada Khaliijka, ayuu intaasi ku daray.
Image captionSaciudi Carabiya ayaa waxa ay eedda dilka Jamaal Khaashuqji dusha kaga tuurtay “wakiillo damiir laawayaal ah”
Waxaa gudaha dhismaha lagu jarjaray maydkii Khaashuqji iyadoo xubnihii jirkiisana markii dambe lagu wareejiyay qof maxalli ah oo ku sugnaa bannaanka goobta uu dilka ka dhacay, waa sida uu sheegayo Mr Shalaan.
Shirkii Dhaqaalaha Caalamka ee dhawaantan lagu qabtay magaalada Davos ayuu wasiirka maaliyadda ee Sucuudiga, Maxamed Al-Jadaan, waxa uu wufuuddii u sheegay in dalkiisa uu “aad uga xunyahay wixii ku dhacay Jamaal Khaashuqji”.
Turkiga ayaa dhanka kale waxa uu aqoonsaday haybta 15 nin oo uu rumaysan yahay inay ka tirsan yihiin sirdoonka Sucuudiga oo ka soo degay gagida diyaaradaha ee Istanbul kaddibna ka dhoofay xilligii uu dilka dhacayay.
Lama oga mid ka mid ah dadkaasi uu ku jiro dadka lagu maxkamadaynayo magaalada Riyaad.
Mareykanka ayaa waxa uu cunaqabateyn ku soo rogay 17 sarkaal oo Sucuudi ah, oo uu ka mid ah yahay Sacuud al-Qaxdhaani, oo horay lataliye ugu ahana jiray amiirka dhaxalsugaha ah kaas oo uu Mareykanku ku eedaynayo inuu “qeyb ka ahaa qorshaha iyo fulinta howgalka” lagu dilay Jamaal Khaashuqji.
Ma ay cadda in mid ka mid ah 17 qof la maxkamadaynayo iyo in kale.
« LONDON OO LAGU SOO BANDHIGEY SHIDAALKA IYO GAASKA KU JIRA XEEBAHA DALKA SOOMAALIYA
Finland: Lacago bilaash ah oo sababay shaqo la’aan »